अपराध अनुसन्धानमा ‘लैला र पिकु’ सदैव उत्कृष्ट प्रहरी कुकुर
मनोज भुजेल । प्रदेश १ मा घटेका धेरै जसो जघन्य प्रकृतिको घटनामा ट्रयाकर डग लैला र पिकुको नाम अग्रपङ्तिमा आउँछ । १ नं. प्रदेश प्रहरी र संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय धरानको अपराध अनुसन्धान अधिकृतले पनि लैला र पिकुलाई घटनास्थल ‘स्नीफिङ’ मा बढी परिचालन गर्ने गर्छन ।
हत्या, बलात्कार, चोरी डकैती तथा शंकास्पद घटनाहरूको अनुसन्धानमा लैला र पिकुको नाम अग्रपङ्तिमा आउनुको कारण पनि यी दुई कुकुरको ‘स्नीफिङ’ बाट कयौं घटनाको सुराक पत्ता लगाएर प्रहरीले अपराधीलाई पक्राउ गर्न सफल भएको उदाहरण छन् ।
अहिले संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय धरानको डग शाखामा रहेका यी दुई जर्मन सेर्फड जताका पोथी कुकुर हुन् । लैला अहिले ८ बर्ष पुगेकी छे भने पिकु भर्खरै साढे ३ बर्ष कटेकी छे । १८ महिना लामो ट्रयाकर विधाको तालिम सकेर दुवैजना अहिले फिल्डमा परिचालित भइरहेका छन् । पिकु भन्दा लैला सिनियरमा गनिन्छे ।
यी दुवैले १ नं. प्रदेशमा घटेका जघन्य अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेको संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय धरानमा प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहाल बताउँछन् ।
सङ्खुवासभाको हत्या प्रकरणमा पनि यी दुई कुकुरले राम्रो काम गरेको उनले अपराध न्यूजसँग बताए । घटनास्थलमा अपराधीले छाडेको सुराक गन्धबाट पहिचान गरि अपराधी भागेको वा लुकेका ठाँउको पत्ता लगाउन लैला र पिकुको खुबी रहेको दाहाल बताउँछन् ।
डग शाखामा अहिले ट्रयाकर विधामा लैला र पिकु कार्यरत छन् । धरानमा ५ र विराटनगर विमानस्थलमा ४ वटा गरी १ न.प्रदेश प्रहरीमा हाल ९ वटा कुकुर कार्यरत छन् । जसमा ट्रयाकरमा २, विस्फोटक पदार्थमा ३, लागूऔषधमा ३ र रेस्क्युमा १ वटा कुकुर छन् । यी कुकुरहरू जर्मन सेफर्ड, लाब्राडोर र गोल्डेन रिट्रिभर जातका हुन्।
भीआईपी सुरक्षा, संसद् भवन, बिनानस्थल सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्थानमा राखिएका विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउन ‘एक्सप्लोसिव’ विधाको कुकुरको प्रयोग गरिन्छ।
यस्तै लागूऔषध विधाका कुकुरले लुकाइ छिपाइ राखिएको लागूऔषध बरामद देखि बोक्ने व्यक्तिको पहिचान गर्ने गर्छ भने रेस्क्यु विधाको कुकुरले दैवी प्रकोपमा फसेका वा पुरिएका व्यक्तिको उद्धार गर्ने गरेको छ।
२०४७ मा दुई वटा कुकुरबाट स्थापना भएको १ नं. प्रदेश प्रहरी कुकुर शाखामा अहिले प्रहरी नायब निरीक्षकको कमान्डमा ९ जना प्रहरी कार्यरत छन्। यी नै अनुभवी प्रहरीले विभिन्न विधाका कुकुरलाई दैनिक तालिम, सरसफाइ, खानपान र फिल्डमा लैजाने गर्छन्।
कर्तव्य ज्यान जस्ता संवेदनशिल घटनाहरूमा अपराधी पहिचान गर्न ट्रयाकर विधाको डग प्रयोग गरिन्छ। भिआइपी सुरक्षा, संसद् भवन, विमानस्थल सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्थानमा राखिएका विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउन ‘एक्सप्लोसिव’ विधाको कुकुरको प्रयोग गरिन्छ।
मानिस भन्दा ५ गुना बढी सुध्ने शक्ति भएका यस्ता तालिमप्राप्त कुकुरले घटना भएको २४ घण्टाभित्रै अनुसन्धानमा खटाउँदा कम्तीमा ८६ प्रतिशतसम्म सफलता प्राप्त हुने प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।
१ नं. प्रदेशमा रहेका यी कुकुरलाई ‘डग ह्यान्डलर’ ले बिहान ६ देखि आधा घण्टा दौड र पिटी खेलाइने गरिन्छ। त्यसपछि बिहानको ब्रेक फास्ट अनि ८ बजेदेखि फिल्डमा विषयगत तालिम दिइन्छ। ९ बजे सरसफाइ अनि १० बजे खाना दिइने गरेको छ। त्यसपछि २ बजेदेखि पुन ५ बजेसम्म विषयगत तालिम र रिहर्सल गराइन्छ।
यी कुकुरलाई सामान्य मानिसले खाने भन्दा भिन्नै ‘डग फुड’ खुवाइने गरिन्छ। एउटा स्वस्थ कुकुरलाई १ केजी तौल बराबर १ सय ३२ क्लोरिनको आवश्यकता पर्छ। एउटा कुकुरले दैनिक ६ सय ग्राम डग फुड खान्छ। अहिले कुकुरको दैनिक भत्ता ३ सय २५ छ।
कुकुरलाई तालिम गराउन सक्षम प्रहरी जवानलाई ‘ह्यान्डलर’ भनिन्छ। एउटा कुकुरलाई एक जनाले नै ह्यान्डल गर्ने गर्छन्। कुकुरले जसले तालिम दियो उसैको मात्र निर्देशन मान्ने गर्दछ। दैनिक तालिममा यी कुकुरहरूलाई लागूऔषध र विस्फोटक पदार्थ जस्ता कुरा लुकाइन्छ र खोज्न लगाइन्छ। ह्यान्डलरले तालिम गराउँदा साङ्केतिक भाषा, कोड, डिकोड कुकुरलाई बुझाइन्छ।
एउटा कुकुरलाई दिइएको विधामा ‘ट्रेन्ड’ हुन १८ महिना लाग्ने कुकुर शाखाका ह्यान्डलर प्रहरी हबलदार उपेन्द्र थापा बताउँछन्। लागुऔषध, विस्फोटक पदार्थ र रेस्क्यु विधाका कुकुरहरू प्राय ६(७ महिनामा ‘ट्रेन्ड’ हुन्छन् भने ट्रयाकर विधामा ‘ट्रेन्ड’ हुन करिब १८ महिना लाग्ने गर्दछ ।